के खारेज होला चिनीको बन्देज ? - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
अर्थ/व्यापार के खारेज होला चिनीको बन्देज ?
April 10, 2019 rastrakhabar 0
काठमाडौँ — चैत्र २७ ।
गत वैशाखमा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै महसुल बढाउन व्यवसायीले दबाब दिए । सरकारले उनीहरूको अनुरोधअनुसारै आयातित चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍यायो ।
३० प्रतिशत महसुल अपुग भएको जनाउँदै उनीहरू पुनः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आयात रोक्न ‘लबिङ’ गरे ।
स्रोतका अनुसार यी मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभएपछि चिनी उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेट्न पुगे । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र मन्त्रालयका सचिवहरू, उद्योगी र केही सांसद पनि सहभागी थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयात प्रतिबन्धको ठाडो निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगतै आपूर्तिमन्त्रीले आयात बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे ।
चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो । परिमाणात्मक बन्देज लगाएको अर्को सातामा ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
प्रवर्द्धनको नाममा आयात रोक्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ महिनापश्चात् व्यवसायीले ‘झुक्याएको’ स्वीकार गरेका छन् । ‘चिनी स्टक भयो, पाकिस्तानको आयात रोकिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । होला त नि भनेर मैले आयात रोकिदिएँ,’ उनले सोमबार उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘पछि त उहाँहरूले ८५ रुपैयाँमा बेच्न थाल्नुभयो, त्यो पनि नपाएर १ सय ५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य बनाए ।’
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उद्योगीले झुक्याएको बताइरहँदा विज्ञहरूले भने प्रधानमन्त्रीले बन्देज खारेज गरेर उद्योगीले झुक्याएको भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयात बन्देज नै गलत थियो ।अहिले प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ,’ अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘परिमाणात्मक बन्देज खारेज गरेर व्यवसायीले झुक्याए/बेइमानी भनेको भएउचित हुन्थ्यो ।’
बन्देज खारेज गर्नका लागि कुनै ऐन/कानुनले नरोक्ने उनले बताए । ‘स्वदेशी कानुन, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कुनै पनि ऐन कानुनले रोक्दैन । बरु खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसंगत हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्देज गर्न नहुने थियो । भइहाल्यो । अब सच्याउनुपर्छ । तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।’ उद्योगीहरूलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल बढाउन सकिने विज्ञहरूको तर्क छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि परिमाणात्मक बन्देज नै गलत भएको बताए । ‘त्यसको साटो भन्सार महसुल बढाउन सकिन्छ तर बन्देज उचित होइन । यसले विकृति आउँछ,’ उनले भने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तअनुसार बन्देज गरेर संरक्षण गरिँदैन । भन्सार महसुल बढाएर गरिन्छ ।’ उद्योगीलाई संरक्षणका क्रममा महसुल वृद्धि हुँदा उपभोक्ताले छनोट गर्ने अवसर पाउँछन् ।
राज्यले राजस्व पाउँछ । अहिले उपभोक्ताहरूले छनोटको अवसर गुमाएको विज्ञ पाण्डेले बताए । ‘बन्देजले राज्यलाई राजस्व आएन । उपभोक्ताले छनोट गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘नाफाजति सबै व्यापारीको खल्तीमा गयो ।’ यसबारे गत असोज १४ गते लेखा समितिले पनि छलफल सुरु गरेको थियो । छलफलमा सांसदहरूले चिनीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदनसमेततयार भयो ।
समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । चिनीबारे धेरै बैठक भए पनि मूल्य भने घटेको छैन । बन्देजबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू पनि बन्देज तत्कल खारेज गरेर उपभोक्ताको छनोट गर्ने हक सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभावले व्यापारीको दबाबमा निर्णय भयो । नेताका लागि लाभको राजनीति भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सरकार व्यापारीको इसारामा नाच्न थालेपछिको दुर्दशा हो । बन्देज तत्काल हटाउनुपर्छ ।’
चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले प्रधाममन्त्रीले सत्यतथ्य नबुझी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको बताए । ‘काठमाडौंका एकजना सांसदले नै ७६ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा कारबाहीमा परेका थिए । ८५ रुपैयाँ भन्नु हाँसोलाग्दो हो । प्रधानमन्त्रीले दुर्गमको भनेको होला । उपत्यकामा त्यो मूल्यमा बिक्री भएकै छैन । चिनी उद्योगीहरू दुःखी छन्,’ अग्रवालले भने, ‘चिनी बिकेन भन्ने बेलामा प्रधानमान्त्रीले चिनी पाइएन भन्नुभो । भृकुटीमण्डपमा प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँमा बोरा/बोरामा बिक्री गर्छु भनेका थियौं । उद्योग र अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ । पसल उपलब्ध गराइएन ।’
काठमाडौंमा बढीमा बिक्री भए त्यो उद्योगीलाई थाहा नहुने उनले बताए । ‘उपत्यकामा बढी नाफा खाने बानी बसेको छ । रिटेलको मूल्य उद्योगीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले थोक र खुद्राको दोष पनि हामीलाई लगाइएको छ ।’ संघका अनुसार अहिले पनि बजारमा भारतबाट तस्करी भएको चिनी आइरहेको छ । तस्करीबाट आयातित चिनी भ्याटसहित ६० देखि ६२ रुपैयाँमा पाइन्छ । तस्करी बढेपछि नयाँ क्रसिङपश्चात् उद्योगीको चिनी बिक्री नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘तस्करीको चिनी आएपछि हाम्रो चिनी प्रतिकिलो कारखानामा ६३ रुपैयाँमा पनि बिकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग २ लाख टन बजारमा चिनी मौज्दात छ ।’ खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले भने चिनी प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँमा बिक्री भएको बताए । ‘होलसेलबाट ७१ मा खरिद हुन्छ । प्याकिङ गर्दा ७३/७४ पर्छ । नाफा नखानेले ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘अझै नाफा खानेले ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।’
शायद अवार्ड पाउन मेरो भाग्यमा नै छैनः तापसी पन्नू
हाेमस्टेका महिलालाई सिप विकास तालिम प्रदान